Ukubuka Ikhalenda Lakho Lokuqukethwe | Martech Zone
Ukubheka Ikhalenda Lakho Lokuqukethwe
NgoLwesithathu, July 6, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukubloga nemithombo yezokuxhumana kungumqhudelwano wokukhiqiza okuqukethwe okubalulekile nsuku zonke kubalaleli bakho. Inhloso ukukhiqiza igunya elanele nokuqukethwe esinabafundi, abalandeli noma abalandeli abagcina bekuguqula babe ngamakhasimende. Lokho kuthatha isikhashana, kwesinye isikhathi, ngakho-ke kubalulekile ukugcina iso lakho ligxile phambili. Enye indlela ongakwenza ngayo lokhu ukufaka ikhalenda lokuqukethwe ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe.
Ikhalenda lokuqukethwe likuvumela ukuba ubone ngeso lengqondo okuthunyelwe kwakho ngokuzayo ukuze ukwazi ukuqhubeka nezidingo zesu lakho lokuqukethwe eliphelele. Ukuhlanganiswa usanda kukhipha ikhalenda lokuqukethwe elimnandi elivumela umlawuli ukuthi athole ukubuka konke okuqukethwe - kufaka phakathi okuqukethwe umlawuli okufanele akuvume. Uyabona ukuthi bengingenzi kahle kakhulu ekukhipheni okuqukethwe ngenyanga edlule!
Njengoba nginakho kokubili a Ukuhlanganiswa blog nebhulogi yeWordPress, benginelukuluku lokuthi ngabe kukhona umuntu owakhe into efanayo yeWordPress… futhi banayo! Yi- Ikhalenda Lokuhlela le-WordPress.
Ikhalenda Lokuhlela le-WordPress likuvumela ukuthi ungeze okuthunyelwe futhi ukuhudule bese ukuwisa. Ngakho-ke uma ungumphathi wezokuxhumana okhuthele ngempela, ungagcwalisa amasonto akho ekhalenda ngaphambili futhi unikeze okuqukethwe kubasebenzisi bakho. Le yindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi uletha izidingo zecebo elihle lokuqukethwe!
Tags: Ucwaningo Lwemakethe Eyisisekeloucwaningo oluyinhlokoiseluleko se-software
Igridi Yokuqukethwe v2
Inani Lokumaketha Okuqukethwe
Jul 6, 2011 ngo-7: 31 PM
Kuhle, bengifuna indlela yokwenza lokhu ngengosi yami yamagama. Iwebhusayithi enhle nayo ngendlela.